Stockholm oo lagu amray in ay 35,000 gabar siiso | Somaliska
Magaalada Stockholm ayaa laga doonayaa in ay siiso lacag dhan 35,000 oo karoon gabar Muslimad ah oo baraaktiig looga cayriyay xijaabkeeda dartiis. Shaqada baraatiiga ah ayaa ahayd xaaqitaanka dhulka, balse markii gabadhu soo xaadirtay shaqada ayaa loo sheegay in qaabka ay u labisantahay aysan jeclaanayn dadka ay la shaqeynayso, ayadoo sidaa darteed meesha looga saaray. Dhacdaadaan ayaa dhacday sanadkii 2008da ayadoo gabadha ay go'aansatay in ay maxkamad la fuusho kamuunka, balse qamiistii ayaa heshiis la gaaray ah in kamuunka uu bixiyo 35,000 oo karoon. "kala duwanaanshaha dhaqanka iyo diinta waa mid ka mid ah suuqa shaqada Iswiidhan. Shirkadaha waxaa qabanaya sharci si looga hor tago cunsuriyeyn xaga diinta..." ayay tiri Katri Linna oo ah mataleysa gabadha. The Local
Magaalada Stockholm ayaa laga doonayaa in ay siiso lacag dhan 35,000 oo karoon gabar Muslimad ah oo baraaktiig looga cayriyay xijaabkeeda dartiis.
Shaqada baraatiiga ah ayaa ahayd xaaqitaanka dhulka, balse markii gabadhu soo xaadirtay shaqada ayaa loo sheegay in qaabka ay u labisantahay aysan jeclaanayn dadka ay la shaqeynayso, ayadoo sidaa darteed meesha looga saaray.
Dhacdaadaan ayaa dhacday sanadkii 2008da ayadoo gabadha ay go’aansatay in ay maxkamad la fuusho kamuunka, balse qamiistii ayaa heshiis la gaaray ah in kamuunka uu bixiyo 35,000 oo karoon.
“kala duwanaanshaha dhaqanka iyo diinta waa mid ka mid ah suuqa shaqada Iswiidhan. Shirkadaha waxaa qabanaya sharci si looga hor tago cunsuriyeyn xaga diinta…” ayay tiri Katri Linna oo ah mataleysa gabadha.
Siminaar ku saabsan doorka midowga yurub ay ku yeelan karaan arimaha soomaaliya oo lagu qabtey Stockhlom
Safaarada Sweden ee Addis Ababa
Malmö: Dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo tababarayo orodada
June 27, 2010 at 20:49
Masha Allah. waa guul u soo hoyatay gabdhaha muslimiinta oo ay ku jiraan kuwa soomaalidu waxaana la inka doonayaa in iinan ka xishoon kana cabsan xaqiina ee aad soo sheegtaan aana dacwaysaan cidii inku xadgudubta.